Ridwaan Xaaji C/welli Oo La Il Daran Jaceyl Uu U Qaaday Jamiilo Xasan Garuun -Daawo Sawirada - iftineducation.com
iftineducation.com – Ilo xog ogaal oo laga helayo gudaha shaqaalaha Tv-ga Universal ee London ayaa sheegaya in xariirkii jaceyl ee ka dhaxeeyay Ridwaan Xaaji C/welli iyo Jamiilla Xasan Garruun uu marayo heer gabagabo ah ka dib xanuuno badan oo murago xanabarsan iyo hinaase badan oo uu soo maray.
Ilo wareedkaan ayaa sheegaya in Ridwaan uu yahay qofka jaceylka uu soo ritay isla markaana sanadkii ugu dambeeyay uu dadaal dheer uu galay sidiii xitaa qanacsanaan uu uga heli lahaa Jamiilo Hassan Garruun .
Wariye ka tirsan Universal oo qariyay maagciisa ayaa sheegaya in Jamiilo ay in badan ka mer meertay in ay xariirka jaceyl ka ogaalato balse mid ka mid ah shaqaalaha ayaa Jamilo kor hoos ula hadlay , ka dib ogalaashaheeda wax ay in badan ka meer meertay in ay banaanka la soo istaagto jaceylkaas waayo Ridwaan ayay ka dareentay in si si u kul kulul yahay isla markaana hinaasa leyahay .
Waxaa ugu daran ka dib markii Ridwaan uu ka maseeray sawiro qaarkood ka badis badis ah oo ay la gashay qaar ka m id ah shaaqalaha gaar ahaan Cabdi xafiid oo iftineducation.com loo sheegay in qorshahiisu ahaa in uu ka dul qaado Ridwaan markii uu dareemay ganauunaca ka soo yeeraya Ridwaan, waxaana horay Facebook-ga Cabdi Xafiid u soo galiyay sawir canka canka ay isku hayeen Jamiilo.
Haatan ayaa la xusayaa in meel wanagsan uu marayo xariirka jaceylka labada wariye isla markana ay bilaabeen in bananka so dhigaan , waxaana warku intaa ku darayaa in Jamilo ogalaatay in ay ooriyo u noqoto Ridwaan iyadoo lagu wado in bilaawga sanadkaan ay aqal galaan .
style=”font-family: Verdana, sans-serif;”>Mid ka mid ah farsamayaqanda Tvga Universal oo qariyay magaciisa ayaa iftineducation.com u sheegay in heerka jaceyl ee labada lamaane uu hataan gaaray in mamaulka tvga mararka qaar ku yiraahdaan kala sara shaqada iyo xariirka waayo Studio -ga ayayba jaceylka ku jilayaan .
Shabakada Caanka Ah Ee Ka Faaloota Arimaha Bulshada iftineducation.com ayaa u rajeyneysa guul labada jaceyl wadaaga ah kuwii isku waarana allaha ka dhigo aamiin.